ဆောင်းပါး > သားအ > ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း
Paulus hat über die Erkenntnis Christi folgendes geschrieben: "Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden gerechnet; ja ich achte nun auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüsst habe, und ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne" (Philipper 3,7-၃။ ၄)။
ခရစ်တော်အားသိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ပေါလုအတွက်မူအခြားအရာအားလုံးအရေးမကြီးပါ။ ခရစ်တော်၏အသိပညာသည်ပေါလုအတွက်အရေးကြီးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းအရေးကြီးပါသလော။ အဲဒါကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုဖော်ပြသလဲ။
Diese Erkenntnis ist nicht etwas, das nur in unseren Gedanken existiert, es beinhaltet ein direktes Teilhaben am Leben Christi, eine sich steigernde Lebensgemeinschaft mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus durch den heiligen Geist. Es ist ein Einswerden mit Gott und seinem Sohn. Diese Erkenntnis schenkt uns Gott nicht auf einen Schlag, sondern gibt sie uns Stückweise. Er will, dass wir in Gnade und Erkenntnis wachsen. (2. ပေတရု။ 3,18).
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသောအတွေ့အကြုံသုံးခုရှိသည် - ယေရှု၏မျက်နှာတော်၊ ဘုရားသခင့်စကားတော်၊
ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ခုကိုအသေးစိတ်သိလိုလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်၊ မနိုင်လေ့လာသည်။ လူတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာကိုအထူးသဖြင့်ကြည့်ရှုကြသည်။ ယေရှုနှင့်လည်းအလားတူပင် သခင်ယေရှု၏မျက်မှောက်တော်၌သူနှင့်ဘုရားသခင်အကြောင်းများစွာမြင်နိုင်သည်။ သခင်ယေရှု၏မျက်နှာတော်ကိုသိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားထဲတွင်အဓိကဖြစ်သည်။
Paulus schreibt von «erleuchteten Augen des Herzens» (Epheser 1,18), die dieses Bild wahrnehmen können. Was wir intensiv betrachten, wird uns auch beeinflussen, was wir mit Hingabe anschauen in das werden wir verwandelt. Zwei Bibelstellen weisen daraufhin: "Denn der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten hiess, der hat es auch in unseren Herzen licht werden lassen zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi" (2. ကောရိန္သု 4,6).
"Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist" (2. ကောရိန္သု 3,18).
ဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယေရှု၏မျက်နှာကိုကြည့်။ ဘုရားသခင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်နိုင်ရန်နှလုံးသား၏မျက်စိဖြစ်သည်။ ဤဘုန်းတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထင်ဟပ်ပြပြီးသားတော်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။
So wie wir Erkenntnis im Angesicht Christi suchen, so werden wir in sein Bild verwandelt! "Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, mit allen Heiligen zu begreifen vermöget, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei, und die Liebe Christi erkennt, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wenden wir uns nun dem zweiten Erfahrungsbereich für Wachstum in der Gnade und Erkenntnis zu, dem Wort Gottes. Was wir von Christus wissen und erkennen können, haben wir durch sein Wort erfahren" (Epheser 3,17-19) ။
ဘုရားသခင်နှင့်အတူစကားလုံးများသည် "မျှတသော" စကားလုံးများမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ကြီးမားသောစွမ်းအင်ကိုမွေးမြူပြီးအသက်၏ရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားမကောင်းမှုမှခွဲထုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများနှင့်သဘောထားများကိုသန့်ရှင်းစေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည်ပြင်းထန်သောအမြောက်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားရမည်။
Lesen wir, was Paulus darüber geschrieben hat: "Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse (Trugschlüsse) zerstören und jede Höhe, die sich wider die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, auch bereit sind jeden Ungehorsam zu rächen, wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist (2. ကောရိန္သု 10,4-6) ။
Dieser Gehorsam, den Paulus hier anspricht ist ein wichtiger Bestandteil der Reinigung. Reinigung und Erkenntnis gehen Hand in Hand. Nur im Licht des Angesichtes Jesu können wir Befleckung erkennen und diese müssen wir loswerden: "Wenn Gottes Geist uns einen Mangel aufzeigt oder irgendetwas, das mit Gott nicht übereinstimmt, dann sind wir zum Handeln aufgerufen! Gehorsam ist gefragt. Gott will, dass diese Erkenntnis verwirklicht wird in einem gottesfürchtigen Wandel. Ohne echte Veränderung bleibt alles Theorie, wahre Erkenntnis Christi kommt nicht zur Reife, sie verkümmert" (2. ကောရိန္သု 7,1).
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှု၏အစေခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခံရခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားမှသာလူ့ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်အိမ်နီးချင်းကိုအမှုဆောင်ခြင်းကအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခသည်ဘုရားသခင့်သားတော်ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လက်ခံရရှိသည့်လက်ဆောင်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ သခင်ယေရှုသည်သူ၏အစေခံကိုလက်ခံသည်။ အသင်းတော်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓမ္မအမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သင့်သည်။ ယေရှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပုံသက်သေဖြစ်သည်။
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေရာမှန်နှင့်အနေအထားသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ဒါပေမယ့်သူက ဦး ခေါင်းအဖြစ်အရာရာကိုညွှန်ကြားသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ဗဟုသုတများရရှိစေရန် ဦး ခေါင်းသည်ဘုရားကျောင်းရှိလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ဘုရားသခင့်သားတော်နှင့်ဆိုင်သောအသိပညာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုသာမကအုပ်စုတွင်တိုးတက်မှုလည်းပါ ၀ င်သည်။ အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်များမှာမတူကြပြီးခရစ်တော်၏အသိပညာတိုးများလာစေရန်အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး ၏လုပ်ငန်း၌အခြားအရာတစ်ခုရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည့်နေရာ၌လည်းဆင်းရဲခြင်းရှိသည်။
“ ဒီလိုအပြန်အလှန် ၀ န်ဆောင်မှုကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော၊ အခြားသူတွေအတွက်ပါဒုက္ခတွေရောက်စေတယ်။ ဤသုံးကြိမ်သောဝေဒနာကိုရှောင်ရှားလိုသူသည်တိုးတက်မှုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားရလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ငါတို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံ။ ခရစ်တော်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခံရစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကျေနပ်မှုအသက်တာကိုဆုံးရှုံးရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသည်။ ထမြောက်တော်မူသောအရှင်သည်ငါတို့၌ကြီးပြင်းသည်အထိ၊ မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းသည်အမှန်ဖြစ်လာသည်” (Fritz Binde“ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်စုံလင်ခြင်း”၊ စာမျက်နှာ ၆၃)
"Ich will aber, dass ihr wisset, welch grossen Kampf ich habe für euch und für die in Laodizea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleische gesehen haben, damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind" (Kolosser 2,1-3) ။